अष्ट्रेलिया पढ्न जानु अघि जान्नै पर्ने १० कुरा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
१. विश्वविद्यालय तथा कलेजबारे सबै जानकारी हासिल गरौ
विदेशी विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले आफ्नो जानकारी वेवसाइटमा राखेका हुन्छन । यदि विद्यार्थीले उपस्थितीका लागि शुल्क तिरेको छ भने उसले इमेलमार्फत वा ओरिएन्टेसनको समयमा जानकारी प्राप्त गर्छ । यससँगै विश्वविद्यालय वा कलेजले उपलब्ध गराउने सबै खाले सेवा सुविधासँगै स्रोतबारे विद्यार्थीले आफूलाई परिचित गराउनुपर्छ ।
२.आवास छान्ने अधिकार जान्ने, खासगरी कलेजको होस्टल बाहिर बस्ने हो भने ।
अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीका लागि आवासका विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध छन् । बोर्डिङ, होमस्टे, हाउस सिटिङ, सेयरिङ, रेन्टिङ, परिवार तथा साथीसँग बस्ने लगायत विभिन्न आवासका विकल्प हुन्छन् । धेरैजसो विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयले ‘आवास सेवा’ विभाग स्थापना गरेका हुन्छन् जस्ले जानकारी र सहायता उपलब्ध गराउँछन् । विद्यार्थीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि अधिकार र उत्तरदायित्व पुस्तिका पढ्नु जरुरी छ ।
३. सबैखाले जानकारी लिखित रुपमा प्राप्त गरेकोबारे सुनिश्चित गर्ने
कलेज वा विश्वविद्यालयले दिने हरेक जानकारी सूचना लिखित रुपमा प्राप्त गरेको बारे आफू सुनिश्चत हुनुपर्छ । किनभने सबै मौखिक सम्झौता प्रमाणि गर्न गाह्रो हुन्छ । विद्यार्थीले आवास तथा खर्चबारे सबै सञ्चारको लिखित प्रतिलिपी राख्नुपर्छ ।
४. विद्यालय भित्र तथा बाहिर थुप्रै नयाँ साथीहरु बनाउने
नयाँ विद्यालयमा जाने विद्यार्थीका लागि यो कुरा महत्वपूर्ण छ । यसले विद्यार्थीलाई विविध पृष्ठभूमिका साथी भेटाउन मद्दत गर्छ । यसले नयाँ संस्कृतिमा मिश्रित हुन र बुझ्न सहयोग गर्छ । अष्ट्रेलिया एउटा बहुसांस्कृतिक समाज भएको देश भएकाले नयाँ साथी बनाउँदा आफूलाई उक्त समाजमा समायोजन गर्न सजिलो हुन्छ ।
५.चूनौतीसँग सामना गर्न तयार रहने
अष्ट्रेलिया मात्रै होइन जुन सुकै देशमा प्रवेश गर्ने नवप्रवेशीहरुलाई घुलमिल हुनु गाह्रो हुन्छ । विभिन्न खाले चूनौतीहरु आइपर्छन । भाषाको समस्यादेखि, विभिन्न प्रकारका समस्याहरु चूनौती बनेर आइदिन्छन् । आफ्ने लक्ष्यप्राप्तीका लागि ती सबै खाले अप्ठ्यारा चूनौतीहरुको सामना गर्ने क्षमता आफूमा हुनु जरुरी छ ।
६. आफूलाई आवश्यक परेका बेलामा प्रश्न सोध्ने र सहयोग माग्ने
नजानेको कुरामा प्रश्न सोधै । आफू विश्वस्त नभएको कुरामा प्रश्न सोधेर सूचना ग्रहण गर्नु निकै जरुरी छ । नजान्नु समस्या होइन । प्रश्न नसोधी नजान्ने बनिरहनु कमजोरी हो । विद्यार्थीलाई सबै जानकारी जान्नु आवश्यक छैन तर सबै जानकारी प्राप्त गर्ने कुशलता भने हुनु जरुरी छ । आवश्यक परेको खण्डमा विद्यालयको आधिकारिक व्यक्तिसँग परामर्श लिनुपर्छ । ताकी भविष्यमा कुनै पनि समस्या नआओस ।
७ .स्थानीय समूदायबारे जानकारी राख्ने
कुनै पनि नयाँ ठाउँमा समायोजना हुने सबैभन्दा सजिलो तरिका त्यहाँको भाषा हो । भाषा जानेपछि त्यहाँको सस्कृति, रहनसहन, बसोबासबारे जानकारी लिने । आफूलाई पनि स्थानीय सरह नै ठाल्ने प्रयास गर्ने । यसो गर्दा स्थानीय समाजप्रति अपनत्वको विकास हुन्छ । स्थानीय जनतासँग घुलमिल हुँदा विश्वास बढी हुन्छ ।
८. गतिशिलताका लागि आफ्ना सबै यातायातको मोडबारे जान्ने
यातायात आवश्यक वस्तु हो । विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालय जाने विभिन्न बाटोबारे थाहा पाउनु पर्छ । जस्तैः बस, रेल, ट्याक्सी, साइकल इत्यादि । यातायातको विभिन्न बाटो थाहा पाउन अथवा विभिन्न रुट पत्ता लगाउनमा विद्यार्थीले केहि समय खर्चिनु पर्छ । केही स्थानीय सडक नक्सा खरिद गर्ने ।
९. आफ्नो पछिल्लो ठाउँमा रहेका परिवार तथा साथीसँग सम्पर्कमा रहने
परिवारको महत्व बुझ्नु धेरै जरुरी छ । यदि आफ्नो नयाँ गतिविधिबारे पूर्ण रुपमा जानकार हुनुहुन्न भने भाग लिनु अघि अझ बढी जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ । आफ्नो खर्च कम गर्ने र निःशुल्क अनलाइन सेवाको सहायता लिने ।
१०.आफूलाई नियमित रुपमा आनन्द प्राप्त हुने कुराहरु गर्ने
विद्यार्थीले कक्षामा समयमा पुग्नु बाहेक नयाँ वातावरणको आनन्द लिन भने नभुल्ने । खेलकुद अभ्यास गर्ने नियमित बानी अथवा आफ्नो मनपर्ने कुरा भएका रेस्टुराँमा बस्न पनि सकिन्छ ।
(लेखक नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का महासचिव हुन )
अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा र त्यसपछिको जीवन : भ्रम र यथार्थ
सम्भाव्य विद्यार्थीका लागि उपयोगी जानकारी विज्ञान श्रेष्ठ १.पार्टटाइम काम गरेर ट्युसन फी तिर्न […]